ओलीले २७ दिनसम्म ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहे : डा. केसी
डा. गोविन्द केसी बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्री ७ महाराजधिराज हुन्। तानाशाह हुन्, कानुन र संविधानभन्दा माथि छन्। ओली नैतिकहीन बनेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य संस्थालाई दोहन गरेर खाने भाँडोमात्रै बनाएका छैनन्।
बिचौलिया, दलाल र माफियासँग मिलेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड गरिरहेका छन्।
शिक्षा र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएका छन्।
सेवामूलक स्वास्थ्य र शिक्षालाई गैरजिम्मेवार तरिकाले नाफामूलक बनाइ सर्वसाधारणको पेटमा लात हानेका छन्।
सरकारले हरेक क्षेत्रलाई दोहन गरेर कमाइ खाने भाँडो बनाएको छ।
समाजवादी साम्यवादीले जनताको पक्षमा काम गर्छन्।
जनताको हितलाई सर्वोपरी ठान्छन्। जनतालाई निचोर्दैनन्, मार्दैनन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क छ भनेर संविधानमा लेख्ने तर, व्यवहारमा लाखौं असुल्ने?
गरिब–निमुखा जनताको पेटमा लात हान्ने?
आफू जनताको रगत पसिनाले कमाएको पैसाबाट बाँचेका छन्।
अर्बौंको भ्रष्टाचार गरेका छन्।
जनताको हकहितमा काम गर्नुको सट्टा आफ्नो स्वार्थका लागि जनता झुलाउने?
आफूअनुकूल कानुन, ऐन, नीतिनियम बनाउने? जनता मार्ने?
जनताका माग सम्बोधन नगर्ने?
के नै मागेका छन् र जनताले? अस्पताल र शिक्षा त हो नि।
छैठौंपटक अनसन बस्दा ओलीले स्वास्थ्य विधेयकलाई बारम्बार तोडमोड गरे।
निमुखामुखी, विद्यार्थीमुखी विधेयकलाई पास गर्न दिएनन्।
विधेयकमा माफियामुखी बुँदा राखेर विधेयक पास गराए।
अनसन बस्दाबस्दै स्वार्थ समूह र आफ्नो रुचीअनुसार पास गरे।
जुम्लामा अनसन बस्दा ओलीले प्रहरी प्रशासन लगाएर मलाई अपहरण गरे।
अस्पतालको भौतिक संरचनामा समेत क्षति पुग्यो।
जहिल्यै सम्झौता हुने तर कार्यान्वय नगर्ने?
सरकारको नैतिकता र नियत खराब छ।
जनताका माग र मसँग भएका सम्झौता रोकेर राखेका छन्।
रोकेनन् भने जनताले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र न्याय पाउँछन्।
हरेकपटक सम्झौता हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन।
अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले जनताको पक्षमा काम गरेको छैन।
यो सरकारले अन्य सरकारको पालामा भएका उपलब्धिसमेत गुमाइदिएको छ।
यो जनताप्रति बेइमानी हो, धोका हो।
१९औं पटकको अनसनमा ओलीले जनताका मागप्रति षडयन्त्र रचिरहे।
माग पूरा हुन नदिन लागिपरिरहे अन्तिम घडिसम्म।
हामीले विश्वास र इमान्दारिसाथ वार्ता गर्न खोजे पनि सरकारले जनताको भलो नचाहने अनेकन प्रपञ्च गरिरह्यो।
हामी सम्झौताको कदर गर्छौं र गरिरहेका छौं।
सम्झौता भनेको समयमा कार्यान्वयन नभए फेरि अनसन बस्छौं।
जनस्वास्थ्यका खातिर जतिपटक पनि सत्याग्रह बस्न तयार छु।
फेरि अनसन बस्नुपरे अहिलेका मागमात्रै नभई अन्य पनि थपिन्छन्।
सरकार जनताप्रति थोरै भए पनि इमान्दारिता देखाओस्, जिम्मेवार बनोस्।
जनताका माग र सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ नत्र ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ।
स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा वरिष्ठताका आधारमा गरिनुपर्छ।
हामीले जहिल्यै भन्दै आइरहेका छौं प्रतिष्ठानलाई आफ्ना आसेपासे कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाउन पाइँदैन।
आइओएममा कनिष्ठ पदाधिकारीलाई प्रमुख नियुक्त गरिएको छ।
उनको योग्यता व्यावसायिक सीप आफ्नो ठाउँमा भए पनि वरिष्ठलाई छाडेर नियुक्त गर्नु गैरकानुनी हो।
ओलीले हरेक निकायलाई पार्टीको बखेडा बनाएका छन्।
आफुखुसी नियुक्त गर्दा व्यावसायिकता हराउनुका साथै सेवामा समर्पित रहनुको सट्टा पदाधिकारी व्यक्ति र पार्टीप्रति बफादार रहन्छन्।
अहिले भएको सुधार पनि धराशयी बन्दै गइरहेको छ।
हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौं। सरकार गैरजिम्मेवार बन्दै गइरहेको छ।
पदाधिकारी नियुक्ति मापदण्डका आधारमा गरिनुपर्छ। नीतिनियम र कानुनको पालना गरिनुपर्छ।
पहिलेको सरकार प्रधानमन्त्री थोरै भए पनि जनताप्रति उत्तरदायी र इमान्दार थिए।
अहिले त बेइमानीबाहेक केही छैन।
ओलीले १९औं अनसनको २७ दिनसम्म निरन्तर ‘ब्ल्याकमेल’ गरिरहे।
प्रधानमन्त्री ओली कुन हदसम्म नैतिकहीन र संवेदनहीन रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ।
योग्य व्यक्तिले स्थान पाउँदैन। पार्टीका कार्यकर्ता र भ्रष्ट व्यक्ति जहिल्यै अघि बढ्छन्।
अन्तिम पटकको अनसन बस्दा भएका सम्झौता यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ।
आज यतिका दिन बितिसक्दा पनि कार्यान्वय कहिले देखि हुने हो, केही अत्तोपत्तो छैन।
ओलीजीको दम्भ संविधानभन्दा माथि छ।
उहाँ संविधान मान्नुहुन्न।
आफूलाई सर्वेसर्वा ठान्नुहुन्छ र आफ्नो फोहरी स्वार्थ मनाउन लागिपर्नुहुन्छ।
राजा श्री ५ थिए, ओली श्री ७ महाराजधिराज।
उनको नियत नै खराब छ।
हुन त उनले हत्या, हिंसा र गुन्डाराजको आडमा राजनीति गरेका हुन्।
अहिले उनको काम प्रहरी परिचालन गर्ने। कसैले केही भन्न बोल्न गर्न नपाइने?
कार्यकर्ता अरिंगाल जसरी घेर्न र टोक्न आउने गराउँछन्।
निमुखाले न्याय नपाउने? अपराधीलाई कारबाही गर्न नसक्ने?
ओलीले हद पार गरिसकेका छन्।
जनताको हक अधिकारका लागि दुई वर्षअघि अनसन बस्दा बलजफती ग-यो।
काठमाडौंबाट एसएसपी पठायो। मलाई अपहरण गरी लिएर आयो।
संसारका कुनै पनि तानाशाहले अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रलाई तोडफोड गर्दैनन् र गर्न दिँदैनन्।
तर, ओलीले मलाई त अपहरण गरे–गरे, अस्पतालसमेत तोडफोड गरे।
मैले जुम्लाबाट आउँदा टिचिङ जान्छु भन्दा जबर्जस्ती गरेर ट्रमा लगे।
माथिको आदेश छ भने। प्रहरी एम्बुलेन्सभित्र पसे।
अपहरण शैलीमा लगे।
सरकार निर्दोषलाई दोषी साबित गर्छ।
ओलीले अहिले गुन्डाको काम प्रहरीबाट गराउँछन्।
अनसन बस्ने–नबस्ने भन्नेबारे परिस्थितिमा भर पर्छ।
माग सम्बोधन नभए फेरि अनसन बस्छु।
म मेरा लागि अनसन बसेको होइन, सर्वसाधारण निमुखा र गरिब जनताका लागि हो।
अब अनसन बसे सरकारलाई जवाफदेही बनाइन्छ।
मर्छु भनी डराउँदिन। डराउने भए सत्याग्रह बस्ने नै थिइनँ।
मलाई मृत्युको भय छैन।
म एकजनाको स्वास्थ्यभन्दा ३ करोड जनताको स्वास्थ्य ठूलो र महत्वपूर्ण हो।
म भाग्दिनँ, डराउँदिन।
(बिहीबार बत्तिसपुतलीको शिल्पी थिएटरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोमेलकर्मी अंगदबहादुर सिंहले रेकर्ड गरेको डा. केसीको भनाइ जस्ताको तस्तै।)
प्रकाशित मिति: बिहीबार, कात्तिक २०, २०७७
छारे रोगबाट कसरी जोगिने?
छारेरोग नसासँग जोडिएको रोग हो। यसको सिधा सम्बन्ध मस्तिष्कका सम्वेदनशिल तन्तुहरूसँग हुन्छ। यो रोग तन्त्रमन्त्रसँग सम्वन्धित हुने पनि कतिपयको विश्वास छ। आयोमेल संवाददाता